Shiinaha ayaa diidi doona caaga - PotatoSystem
Shiinaha ayaa diidi doona caaga
Jan 21, 05:59
в Wararka adduunka, News, Ecology
Dowladda Shiinaha ayaa ku tala jirta in ay mamnuucdo adeegsiga bacaha aan la iloobi karin ee bini'aadanka ah dhamaadka sanadkan. Tan waxaa lagu sheegay qorshaha mashruuca wadajirka ah ee ay soo saareen Guddiga Gobolka ee Horumarinta iyo Dib-u-habeeynta iyo Wasaaradda Ilaalinta Deegaanka ee Shiinaha.
"Soo-saarka, adeegsiga iyo ka-shaqeynta qashinka caaga ah ee aan buuxinin heerarka wuxuu keenayaa isticmaalka aan caadiga ahayn ee ilaha tamarta, wasakheynta deegaanka iyo walaaca bey'ada ee sii kordheysa," ayaa lagu yiri dokumentiga la diyaariyay.
Qoraayaashu waxay qorsheynayaan inay ku yareeyaan isticmaalka caaga guriga 30% shanta sano ee soo socota. Tallaabada koowaad, dhammaadka 2020, mas'uuliyiinta Shiinaha waxay ku tala jiraan inay mamnuucaan wax soo saarka iyo iibinta magaalooyinka waaweyn ee bacaha balaastigga ah wax ka yar 0,025 mm qaro weyn iyo filimada beeraha wax ka yar 0,01 mm qaro weyn, iyo sidoo kale soo dejinta alaabada ceyriinka. Xukuumadda PRC waxay kaloo qorsheyneysaa inay mamnuuceyso adeegsiga badeecado caag ah oo aan ciil lahayn oo ku yaallay makhaayadaha, tafaariiqda iyo meelaha kale ee waaxda adeegga ee magaalooyinka waaweyn ee dalka. Intaa waxaa u dheer, dhamaadka 2020, xumbo, suuf, iyo walxaha kiimikada guryaha qaarkood ayaa laga yaabaa in la mamnuuco.
Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, sanadkii 2017, Shiinaha wuxuu soo saaray 210 milyan oo qashin oo qashin ah, oo ay ku jiraan caagagga guryaha. Marka la gaaro 2030, muggaani wuxuu kordhi karaa 500 milyan oo tan. Qeyb weyn oo qashinka ah waxay ka kooban tahay joodariyada caaga ah ee loo yaqaan 'chopsticks plastic', oo badanaa lagu isticmaalo waddanka. Su'aasha ah suuragalka beddelka suugaan dhaqameed ee Shiinaha wali waa furan yahay.
Tags: ShiinahaBaakadaha caagga ahEcology
Croatia waxay aragtay kobac weyn oo xagga soo dejinta baradhada ah
Webinar #GRIMME: Waa heerarka farsamaynta geedi socodka wax soo saarka baradhada ee dalal kala duwan oo dunida ah